27th November 2018, 12:24 pm | ११ मंसिर २०७५
नेपाल औषधि लिमिटेड २ वर्ष अघि 'कोमा'मा थियो। संस्था त थियो तर उत्पादन बन्द। औषधि उत्पादन हुन छाडेको सात वर्ष भएको थियो। यसबीचमा महाप्रबन्धक बन्ने र कार्यकाल पूरा गरेर हिँड्नेक्रम जारी रह्यो। तर, औषधि लिमिटेडलाई ब्युझाउँन सकेनन्। यस बीचमा औषधि उत्पादन ठप्पै भयो। दुई वर्षअघि तत्कालीन उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जीवनजल उत्पादनको उद्घाटन गर्दै यसलाई पुनर्जीवनको पहल थाले। खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक बनेर औषधि लिमिटेडमा प्रवेश गरेका रोवश कुसुम सुवेदीले यसको पुनर्जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहे। उनी भित्रिएको चार महिनामै उत्पादन सुरु भयो।
सुवेदीले जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्षमै ६ प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु भइसकेको छ। अबको एक वर्षभित्रमा थप १६ भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। महाप्रबन्धक सुवेदी भारतीय औषधि कम्पनीले नेपाली बजारमा गरेको दबदबालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन्। सात वर्षदेखि बन्द भएको सरकारी संस्थाले कसरी काम सुरु गर्यो? सागर बुढाथोकीले महाप्रबन्धक रोवश कुसुम सुवेदीसँग गरेको कुराकानी :
पहिला पनि बजेट आएको थियो, कर्मचारी पनि थिए। काम किन गरेनन्, त्यो बेग्लै पाटो हो। म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएको हुँ। आउनुअघि यो संस्थाको 'स्ट्रेन्थ' र 'विकनेस' सबै अध्ययन गरेको थिएँ। संस्थाको इतिहास र वर्तमानमा म 'अपडेट' थिएँ। यो संस्था सरकार र कर्मचारीले चाहेर बन्द भएको थिएन। यो संस्थाप्रति मेरो 'इमोसनल अट्याचमेन्ट' पनि थियो।
संस्थामा नियुक्त हुनासाथ 'एक्सपर्ट'हरु हायर गरेँ। छिटो के 'रिजल्ट' निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा 'फोकस' भएँ। इतिहासलाई चिर्नु थियो। 'एक्सपर्ट'हरुको सल्लाह अनुरुप 'वर्क आउट' गरेँ।
आएको ४ महिनामै जीवन जल सेक्सन लन्च भयो। यसले सरकार र कर्मचारीलाई काम गरे हुनेरै'छ भन्ने सन्देश दियो। काम देखेर सरकार पनि खुशी। लगानी खेर नजाने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयले लगानी गर्न सहयोग गर्ने भयो। सबै पक्षले सहयोग गरेपछि हामीले अन्य औषधिहरु 'लन्च' गर्यौ।
'तीन वर्षको कार्यकाल बिताउन जाने हो' भनेर म यहाँ आएको भए नेपाल औषधि लिमिटेड यो अवस्थामा आउँदैन थियो। सबै औषधि लिमिटेड चलाउन पोजेटिभ भएका छन् भने, म किन आफ्नो बेस्ट नदिने भनेर आएँ।
प्राइभेट कम्पनीमा काम गरेर आएको मान्छेलाई सरकारी संस्थामा प्रकिया अलमल नै लाग्छ। नोटिस, टेण्डर, सार्वजानिक खरिद जस्ता कुरा उता काम गर्दा एक कलमा हुन्थ्यो। तर, यता धेरै लामो प्रकिया हुन्छ। त्यो प्रकियामा सबै पक्षसँग 'कोअर्डिनेट' गरेँ। सबैले सहयोग गर्नुभयो। मैले यहाँ उपलब्ध नभएका फार्मेसिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट तुरुन्त राख्न पाएँ।
काम गर्न सुरु गर्दा कसरी काम गर्ने भन्ने मात्र 'फोकस' थियो। उत्पादन गर्न केन्द्रित थियौं। अब अहिले बजारको माग धान्न गाह्रो छ। हामीले कति उत्पादन गर्ने? कति फाइदा हुन्छ? कतिवटा प्रोडक्ट निकाल्ने? भन्ने जस्ता कुराहरु सुरुमा योजना बनाइएको थिएन।
अहिले हामीले यी कुराहरु सम्बोधन गर्न 'टेक्निकल रिपोर्ट' बनाएका छौं। यसमा ५ वर्षे योजना छ। अबको ५ वर्षमा नेपाल औषधि लिमिटेडको लक्ष्य के हो? कति उत्पादन गर्ने? जनशक्ति कति राख्ने? कति प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्छ? औषिध लिमिटेडले कति फाइदा गर्छ? भन्ने योजना बनाएका छौं। 'फाइनान्सियल इण्डिकेटेर' सहितको योजना छ, त्यसमा।
अहिले ६ वटा औषधि उत्पादन हुन्छ। यही वर्षमा १६ वटा औषधि उत्पादन भइसक्छ। यहाँ बनाउन मिल्ने, मार्केट माग र मुनाफा हेरेर उत्पादन थप्दै जान्छौँ। मेरो ठाउँमा जो आए पनि त्यही रिपोर्टलाई 'फलो' गरे नेपाल औषधि लिमिटेड अब कहिल्यै बन्द हुँदैन। अब औषधि लिमिटेड कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा कसैलाई 'कन्फ्युजन' हुँदैन।
म्यान, मेसिन र मनीमा इन्पुट बढाउँदै लगियो भने धेरै भन्दा धेरै 'डिमाण्ड' पुर्याउन सक्छौं। २१ औं शताब्दीमा मान्छे क्यान्सर लागेर त बाँच्छन्, हाम्रो देशमा जीवन जल नपाएर मर्छन्। त्यसैले हाम्रो 'टार्गेट' दुर्गममा हो। यो वर्ष कालिकोटसम्म हामीले जीवन जल र सिटामोल पुर्याउन सफल भएका छौँ। बिस्तारै हामी देशभर पुर्याउछौँ।
मैदानमा कुनै नयाँ 'स्ट्रङ प्लेयर' आएपछि खेलिरहेको 'प्लेयर'लाई मन पर्दैन। र, नयाँ प्लेयर नौलो रणनीति लिएर मैदान छिरेन भने टिक्न सक्दैन। यो हरेक क्षेत्रमा लागू हुने कुरा हो।
२० वर्षअघि भारतीय कम्पनीको ८० प्रतिशत दबदबा थियो नेपाली बजारमा। अहिले त्यो घटेर ५०/५० मा भएको छ। टेक्नोलोजी र लगानी बढ्दैछ। सरकारले नै लगानी गरेपछि अझै छिटो 'ग्रोथ' हुन्छ। अहिले तत्काल नै नभनौँ अबको ५ वर्षभित्रमा भारतीय कम्पनिको औषधि ५ देखि १० प्रतिशत मात्र हुन्छ। यही गतिमा 'डेभलभमेन्ट' हुँदै गयो भने ५ देखि १० वर्षमा भारतीय कम्पनीको दबदबा अन्त्य गर्न सक्षम हुन्छौं।
सुरुमा सबैले शंका गर्थे। 'यस्ता कति आए कति गए काम गर्न सकेनन्, यसले के चमत्कार गर्ला?' भनेर शंका गर्थे मलाई पनि यहाँ आउनुअघि 'कन्फ्युजन' थियो। प्राइभेट कम्पनीमा टेक्निकल फिल्डमा काम गरेको थिएँ। यहाँ आएर काम गर्न सकिन भने करियरमा दाग लाग्ने त हैन? भन्ने डर थियो।
एकदम धेरै कुराहरु छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा सिकेको 'कन्फिडेन्ट' हो। अरु संस्थामा भन्दा यहाँ काम गर्दा धेरै 'कन्फिडेन्ट डेभलप' हुने रहेछ। 'सक्सेस' हुने ठाउँमा भन्दा फेलियर हुने सम्भावना भएको ठाउँमा काम गर्दा च्यालेन्ज धेरै हुन्छ। त्यो च्यालेन्ज फेस गर्न यहाँ सिकेँ।
बन्द भएको यस्तो संस्थामा आउन 'रिस्क' कसरी लिनुभयो?
नेपाल औषधि लिमिटेड खुल्दा खुशी हुने जति धेरै छन् दु:खी हुने पनि त होलान् नि। मार्केटमा 'कम्पिटिसन' बढेको छ, गाह्रो त छ नि धेरैलाई। सरकारी संस्थामा काम नगर्दा भन्दा बढी काम गर्दा 'रिस्क' बढी हुने देख्नु भएकै छ नि। तर, मैले यहाँ काम गर्न नसकेको भए मेरो करियर सक्किन्थ्यो।
अब मेरो मुख्य ध्यान भनेको म गए पनि औषधि लिमिटेडलाई यो स्थानबाट तल झार्नुभएन। 'म्यान', 'मेसिन' र 'मनीमा' इन्पुट दिनुपर्यो ।
योजनाअनुसार काम भइरहेको छ। रिजल्ट राम्रै आइरहेको छ। सक्ने र सम्भव हुने काम मात्रै गर्ने योजना बनाउँछु। अहिले आएर 'स्नेक एन्टी भेनोम'को बारेमा रिसर्च गरिरहेको छु। त्यो उत्पादन गर्न एकदम गाह्रो छ। लगानी प्रविधि र वातावरण सबै राम्रो चाहिन्छ। त्यसमै रिसर्च गरिरहेको छु।
एक 'भाइल' औषधि नभएर मानिसहरु मरिराख्ने कि अर्बौ लगानीको लोभ नगरिकन स्नेक एन्टिभेनम उत्पादनमा लाग्ने। यसैमा एक्सपर्टहरुसँग कुरा गरिरहेको छु।
मृत औषधि लिमिटेडको पुनर्जन्म ‍: के रोक्ला भारतीय औषधिको दवदवा? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।